Iziphi Izinzuzo Esingazithola Ku-PEA Supplement?
Ikhiqiza i-Tadalafil powder Ngobuningi!
I-Urolithin A 8-Methyl Ether
I-Mt2 eluhlaza (i-Melanotan-II) powder
I-Synephrine Hcl Powder eluhlaza
I-Lorcaserin Powder eluhlaza
I-Lorcaserin Hcl Powder eluhlaza
I-Orlistat Pwoder eluhlaza
Isidoda Insangu Oligopeptide Powder
SEA Ikhukhamba Peptide Powder
Ubumba Oligopeptide Powder
I-Tadalafil Powder (171596-29-5)
I-Palmitoylethanolamide (PEA) Ukubuka konke
Kukhona okubikiwe ukuthi i-Food and Drug Administration ivume ukufaka isicelo sesivivinyo somtholampilo ukwelapha i-COVID-19 ngokusebenzisa umuthi wokwenziwa olingisa isenzo semolekyuli esitholakala ensangu.
Umuthi wokwenziwa, obizwa nge-ultramicronized palmitoylethanolamide (i-micro PEA), kukholakala ukuthi usebenza njenge-anti-inflammatory. I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) "iyi-fatty acid eyenzeka ngokwemvelo" efana ne-endocannabinoid, elinye lamaqoqo ezinhlayiya ezitholakala ku-cannabis kulokho okubhekiswe kuma-CB2 receptors. Ama-receptors e-CB2 kucatshangwa ukuthi alinganisa kokubili ukuvuvukala nobuhlungu emzimbeni wonke womuntu.
Njengoba i- [micro PEA] isetshenziswe eYurophu iminyaka engama-20, abanye abahlinzeki bezempilo base-Italy babekhuthaza ukusetshenziswa kwe-micro PEA ukwelapha iziguli ze-COVID-19 futhi babethola impumelelo ethile.
I-COVID-19 enamandla ibonakala ngempendulo yokuvuvukala ejabule ngokweqile engaholela esivunguvungwini se-cytokine. “I-micro PEA ayisona isibulali magciwane, kodwa bayakholelwa ukuthi inganciphisa leyo mpendulo yomzimba, engaba yingozi.
Yini iPalmitoylethanolamide (PEA)?
I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) iyi-lipid eyenzeka ngokwemvelo emzimbeni wethu esigabeni samafutha amide acid. Ngakho-ke i-lipid yendabuko. I-Pea nayo ikhiqizwa ngokwemvelo ezitshalweni nasezilwaneni.
IPalmitoylethanolamide (PEA) ingatholakala ekudleni okufana nobisi, ubhontshisi wesoya, uphizi wasengadini, i-soy lecithin, inyama, amaqanda namakinati.
Umnqobi weNobel uLevi-Montalcini ukhombe iPalmitoylethanolamide (PEA) njengemolekyuli eyenzeka ngokwemvelo, echaza ukubaluleka kwayo ekwelapheni izifo nezinhlungu ezingalapheki. Ngemuva kokutholwa kwakhe, kwenziwe amakhulu ezifundo zesayensi ukukhombisa ukuthi iyasebenza futhi iphephile ukusetshenziswa. I-Palmitoylethanolamide (PEA) ichazwa emibhalweni yesayensi njenge- i-painkiller yemvelo.
I-Phcoker ingumkhiqizi onguchwepheshe wokukhiqiza i-Palmitoylethanolamide (PEA) powder
Thumela ngokushesha uphenyo: Oxhumana nathi
I-Palmitoylethanolamide izinzuzo - Iyini i-Palmitoylethanolamide esetshenziselwa?
I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) i-fatty acid amide futhi ihlanganisiwe futhi isebenza ngaphakathi komzimba wethu ukulawulwa kwemisebenzi ehlukahlukene. I-amide fatty acid engapheli, engaphansi kwesigaba se-nuclear factor agonists. I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) empeleni itholwe kabanzi ezinhlobonhlobo eziningi zezilwane ezivuvukalayo, kanye nasezivivinyweni eziningi zezokwelapha.
I-painkiller yemvelo futhi ingasetshenziselwa ubuhlungu obungapheli nokuvuvukala. Ibuye ibe neminye imiphumela ezuzisayo efana ne-neuropathic ache, i-fibromyalgia, i-sclerosis eminingana, ukulimala okuphindaphindayo, ukutheleleka komgudu wokuphefumula, nezinye izifo eziningi.
Ezinye izinzuzo ze-Palmitoylethanolamide ezibikiwe zibandakanya;
i. Usekela impilo yobuchopho
Izinzuzo zePalmitoylethanolamide ekwandiseni impilo yobuchopho zihambisana namandla alo okulwa nokuvuvukala kwe-neural futhi kugqugquzelwe amaseli we-neural asinde. Lokhu kuphawuleka kakhulu nabantu abanenkinga yokuphazamiseka kwemizwa kanye nesifo sohlangothi.
Isibonelo, ocwaningweni lwabantu abangama-250 abaphethwe yisifo sohlangothi, kutholakala isithasiselo se-palmitoylethanolamide esifakwa kanye ne-luteolin esenza ngcono ukululama. I-PEA itholwe ukuthuthukisa inkumbulo, impilo ejwayelekile yobuchopho kanye nokusebenza kwansuku zonke. Le miphumela ye-palmitoylethanolamide powder yabonwa ezinsukwini ezingama-30 ngemuva kokungezelelwa futhi yanda ngaphezu kwenyanga eyodwa ngaphezulu.
ii. Qeda izinhlungu eziningi nokuvuvukala
Ososayensi bahlinzeka ngobufakazi obukhulu bezakhiwo zokwehlisa i-Palmitoylethanolamide. Empeleni, i-Palmitoylethanolamide inikeza ukukhululeka kobuhlungu ezinhlotsheni ezahlukahlukene zobuhlungu nokuvuvukala. Olunye ucwaningo olukhombisa izakhiwo zesiza sobuhlungu be-Palmitoylethanolamide yile;
Ocwaningweni olubandakanya izilwane, isongezo se-palmitoylethanolamide kanye ne-quercetin kwatholakala ukuthi kunikeza ukukhululeka ebuhlungwini obuhlangene kanye nokwenza ngcono ukusebenza ngokuhlanganyela nokuvikelwa koqwanga ekulimaleni.
Olunye ucwaningo olwandulelayo lukhombisa ukuthi i-PEA ingasiza ekunciphiseni izinhlungu zezinzwa ezigulini ezinesifo sikashukela (isifo sikashukela sezinzwa).
Kokunye ukuhlola okwenziwe ngabantu abayi-12, umthamo we-Palmitoylethanolamide wama-300 no-1,200 mg / usuku olunikezwe cishe amasonto amathathu kuya kwayi-3 utholwe ukwehlisa ubukhulu bezinhlungu ezingamahlalakhona kanye ne-neuropathic.
Ucwaningo lweziguli ezingama-80 ezihlushwa i-Fibromyalgia syndrome lithole ukuthi i-PEA ngaphezu kweminye imishanguzo yokuphazamiseka okungenzeka yehlise izinhlungu.
Ngaphezu kwalokho, ezinye izifundo eziningi zibonisa i-Palmitoylethanolamide pain yokusiza ebuhlungwini kufaka phakathi ukukhululeka ebuhlungwini be-pelvic, kubuhlungu besayensi, ebuhlungwini emuva, kubuhlungu bomdlavuza phakathi kwabanye.
iii. Isiza ukunciphisa izimpawu zokucindezeleka
I-PEA ithonya ngokungaqondile ama-receptors anesibopho semizwa. Olunye ucwaningo lukhombisa ukukhululeka kokukhathazeka njenge-palmitoylethanolamide njengeqhaza elibalulekile ekulweni nokudangala.
Ocwaningweni lweziguli ezingama-58 ezinengcindezi, i-Palmitoylethanolamide supplement ngo-1200 mg / ngosuku kanye nemithi ye-antidepressant (citalopram) elawulwa amasonto ayi-6 yatholakala ukuze ithuthukise kakhulu imizwa nezimpawu ezijwayelekile zokucindezeleka.
iv. Kuqeda umkhuhlane ovamile
I-Palmitoylethanolamide iyazuza ekulweni namakhaza ajwayelekile alele emandleni ayo okuqeda igciwane elibhekele umkhuhlane ovamile (igciwane lomkhuhlane). Ngokumangazayo, umkhuhlane ojwayelekile wenzeka kabanzi futhi uthinta cishe wonke umuntu ikakhulukazi abantu abane-immune comprised.
Ucwaningo olwenziwe ngamasosha asemasha ayi-900 luveze ukuthi umthamo we-Palmitoylethanolamide we-1200 mg ngosuku unciphise isikhathi esithathwe yilowo obambe iqhaza ukuze aphulukise emakhazeni futhi nezimpawu ezinjengobuhlungu bekhanda, umkhuhlane kanye nomqala obuhlungu.
v. Kwehlisa izimpawu ze-insular (multiple) sclerosis
Njengoba inezakhiwo zokulwa nokuvuvukala ezifakazelwe ze-Palmitoylethanolamide, akungabazeki ukuthi i-PEA ilungele ukwelapha i-sclerosis eminingi.
Ocwaningweni lweziguli ezingama-29 ezihlushwa i-multiple sclerosis esezingeni eliphakeme, i-PEA yengezwe ku-standard standard ye-interferon IFN-β1a kutholakale ukuthi yehlisa izinhlungu futhi yathuthukisa ikhwalithi yempilo yeziguli.
vi. I-Palmitoylethanolamide ithuthukisa imetabolism
I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) iyakwazi ukubopha i-PPAR- α, i-receptor enesibopho semetabolism, isifiso sokudla, ukunciphisa umzimba kanye nokushisa kwamafutha. Lapho ukwamukelwa kwe-PPAR- α uhlangabezana namazinga aphezulu wamandla asiza umzimba ukuthi ushise amafutha amaningi ekuzivocavoca umzimba ngakho-ke wehlisa isisindo.
vii. I-Palmitoylethanolamide inganciphisa ukudla kwakho
I-Palmitoylethanolamide isisindo sokulahlekelwa isisindo iboniswa emandleni ayo okuthonya iphango lakho. Okufanayo nokukhulisa imetabolism, lapho i-PPAR- α receptor icushiwe kuholela ekuzweni kokugcwala ngenkathi kudliwa ngaleyo ndlela kukusiza ukulawula inani lamakhalori adliwayo.
Ngaphezu kwalokho, i-Pea ibhekwa njenge-fatty acid ethanolamides edlala indima ebalulekile ekondleni yokuziphatha. Ocwaningweni lwamagundane ashibhile kakhulu ngokuthola isisindo esikhulu, isengezo se-PEA esilinganisweni sama-30 mg / kg kumaviki awu-5 satholakala sokwehlisa kakhulu ukudla kwabo, isisindo esinamafutha futhi ngenxa yalokho isisindo somzimba.
viii. Imiphumela yokulwa nokuvuvukala yePalmitoylethanolamide ngesikhathi sokuzivocavoca
Umuntu angathola ubuhlungu nokuvuvukala ngesikhathi nangemva kokusebenza ngenxa yesisindo eseqile. Yebo, isengezo se-PEA singasiza ukuvimbela lokhu ngokuvuselela umsebenzi wokulwa nokuvuvukala we-PPAR- α receptor. I-Palmitoylethanolamide nayo ingavimbela ukukhishwa kwama-enzyme wokuvuvukala ngezicubu zomuntu ze-adipose.
Ngubani okufanele athathe isengezo sePalmitoylethanolamide (PEA)?
I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) isengezo ilungele bonke abaphethwe yizinhlungu ezingezinhle noma ukuvuvukala futhi futhi noma ngubani onesifiso sokuncipha kwesisindo kungaba ngomuthi noma cha. I-PeA iye yabonwa ukuthuthukisa ukusebenza kahle kwezinye izidakamizwa. Kuyindlela kulabo abangatholi mpumuzo ekusebenziseni ababulala izinhlungu ababekiwe.
Impumuzo yokukhathazeka yePalmitoylethanolamide kuyimfanelo enhle kakhulu noma ngubani osengozini yokudangala noma ohlushwa ukucindezeleka kufanele athathe i-PEA.
Ngaphezu kwalokho, umuntu uzovuna okuningi kwe-Pea kusuka kwizithasiselo ngoba abakhiqizi bafuna ukwakheka okwandisa i-Palmitoylethanolamide bioavailability emzimbeni wakho.
I-PEA isuselwa kuphi?
I-Pea ikhiqizwa ngokwemvelo emizimbeni yethu futhi nasezilwaneni nasezitshalweni. Kodwa-ke, kubantu abanobuhlungu obungapheli noma ukuvuvukala, i-PEA yenzeka ngokunganele ngakho-ke isidingo sezengezo ze-PEA.
IPalmitoylethanolamide ingatholakala emithonjeni yokudla enothe ngamaprotheni afana nobisi, inyama, ubhontshisi wesoya, i-lecithin yesoya, amakinati kanye nophizi basegadini phakathi kwabanye. Kodwa-ke, i-PEA etholakala kwimithombo yokudla ngamanani amancane. Lokhu kwenza ukukhiqizwa kwenqwaba ye-palmitoylethanolamide kudingekile ukuhlangabezana nalesi sidingo sokudla.
Ngabe i-PEA ikukhuphula phezulu?
I-Phenethylamine ne-Palmitoylethanolamide bobabili bangabiza i-PEA, kepha imikhiqizo ehluke ngokuphelele.
I-Phenethylamine (i-PEA) iyinhlanganisela ephilayo, i-monoamine alkaloid yemvelo, kanye ne-trace amine, esebenza njengohlelo oluphambili lwezinzwa ezikhuthaza abantu. I-phenethylamine ivuselela umzimba ukuthi wenze amakhemikhali athile adlala indima ekucindezelekeni nakwezinye izimo zengqondo.
Kuthathwe ngemithamo ye-500mg-1.5g ngomthamo ngamunye, njalo emahoreni ambalwa, i-PEA inikeza umsebenzisi umuzwa wenjabulo, amandla, ukukhuthazeka, kanye nokuphila kahle.
Kodwa-ke, ngicela wazi ngomusa ukuthi iPhenethylamine (PEA) akuyona iPalmitoylethanolamide (PEA). Izithako ze-phenethylamine azange zamukelwe yi-FDA ukuthi zisetshenziselwe ukwelashwa. I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) yinto yemvelo ekhiqizwa ngumzimba; kusebenza kahle futhi kuphephile ukukusebenzisa njengesengezo sobuhlungu nokuvuvukala.
Ingabe i-PEA isengezo siphephile?
I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) yinto yemvelo ekhiqizwa ngumzimba; kusebenza kahle futhi kuphephile ukukusebenzisa njengesengezo sobuhlungu nokuvuvukala. Akukho miphumela emibi ye-palmitoylethanolamide ebikiwe futhi akukho ukuxhumana okungekuhle nezinye izidakamizwa.
Iyini imiphumela emibi ye-PEA?
Ayikho imiphumela emibi kakhulu noma ukuxhumana kwezidakamizwa kubikwe kuze kube manje. I-Palmitoylethanolamide ingathathwa kanye nanoma iyiphi enye into. Ithuthukisa umphumela wokuqeda izinhlungu wama-analgesics akudala nama-anti-inflammatories.
Ingabe iPalmitoylethanolamide iphephile ekukhulelweni?
Akufanele isetshenziswe ngabesifazane abakhulelwe.
IPalmitoylethanolamide ingasiza ekubhekaneni nokudla ukuvuvukala nobuhlungu obungapheli.
Kufanele ithathwe kuphela ngaphansi kokuqondisa kwezokwelapha.
I-Palmitoylethanolamide ukuphila okungaphelele - Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ipea lisebenze?
I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) ingathathwa kanye neminye imithi yezinhlungu noma iyodwa, njengoba yelulekwe uchwepheshe wezokunakekelwa kwezempilo, ukusekela ukukhululeka kobuhlungu.
Ukusebenza kokuqedwa kobuhlungu ngu-8 hr
Imiphumela iyahlukahluka; imiphumela ngaphakathi kwe-48 hr kwabanye abantu, kepha sebenzisa amasonto ayi-8 ukuthola imiphumela ephezulu, ingasetshenziswa isikhathi eside ukuthola ubuhlungu obungapheli bezinzwa.
I-PEA isebenza kanjani ngobuhlungu?
Ucwaningo lukhombisile ukuthi i-PEA inezinto ezilwa nokuvuvukala kanye ne-anti-nociceptive futhi ukuyithatha njalo kungakhuphula impendulo yemvelo yomzimba ebuhlungwini ngokunciphisa impendulo yamaseli wesistimu yezinzwa abangela ubuhlungu.
I-Palmitoylethanolamide futhi isebenza ngokungaqondile ukwenza imisebenzi yamanye ama-receptors njengama-cannabinoid receptors. I-PEA ivuselela ngokungaqondile ama-cannabinoid receptors (i-CB1 ne-CB2) ngokusebenza njenge-enzyme (i-FAAH -fatty acid amide hydrolase) ebandakanyeka ekuwohlokeni kwe-cannabinoid anandamide. Lokhu kusiza ekukhuliseni amazinga e-anandamide emizimbeni yethu, enesibopho sokuphumula nokulwa nobuhlungu.
Iyini i-PEA yokuqeda izinhlungu?
I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) yinto yemvelo ekhiqizwa ngumzimba; iyi-amide fatty endo native, engeyesigaba se-nuclear factor agonists, futhi ingasetshenziswa njengesengezo sokwelashwa kobuhlungu nokuvuvukala. I-PEA iyimolekyuli yemvelo, evikelayo, enamafutha ekhiqizwa emzimbeni wethu, isiza ukusekela imithambo yemisipha ye-myelin yokusebenza okuhle kwezinzwa.
I-PEA iyi-acid enamafutha ebandakanyeka emisebenzini ehlukahlukene yamaselula ekuvukeleni nobuhlungu obungapheli, futhi ikhonjisiwe ukuthi inezimpawu zokuvikela ukuvuvukala, anti-inflammatory, anti-nociceptive (anti-pain) kanye ne-anti-convulsant. Iphinde inciphise ukwanda kwamathumbu emathunjini kanye nokwanda kwamangqamuzana omdlavuza, kanye nokuvikela i-endothelium yemithambo yegazi enhliziyweni yeschemic. Imvamisa kubantu abanezinkinga ezingapheli, umzimba awukhiqizi i-PEA eyanele, ngakho-ke ngokuthatha i-PEA ukwengeza ukushoda komzimba kungaba lusizo ekusizeni ukwelapha lezi zimo.
Ingabe i-Pea i-anti inflammatory?
I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) iyinto ethokozisayo yokulwa nokuvuvukala futhi ingahle ibambe nesithembiso esikhulu sokwelashwa kwezifo (zomzimba) eziningi zomzimba, kufaka phakathi isifo samathumbu esokuvuvukala nezifo ezivuthayo ze-CNS.
Ingabe ipea ilungele i-arthritis?
I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) inikeza inzuzo ye-arthritis zombili maqondana nokunciphisa ukuthuthukiswa kanye nokugcinwa kobuhlungu obungapheli kodwa futhi nokusiza ukunciphisa intuthuko yokubhujiswa okuhlangene okuhambisana ne-arthritis.
Yimaphi ama-painkillers amahle kakhulu wezinhlungu zezinzwa?
I-PEA (palmitoylethanolamide) ibilokhu ikhona kusukela ngawo-1970 kodwa isithola idumela njenge-ejenti entsha ekwelapheni ukuvuvukala nobuhlungu. Akukho kuhlangana kwezidakamizwa noma imiphumela emibi kakhulu etholakele.
I-PEA ikhombisile ukusebenza kahle kobuhlungu obungapheli bezinhlobo eziningi ezihambisana nezimo eziningi ezibuhlungu, ikakhulukazi ngobuhlungu be-neuropathic (nerve), ubuhlungu bokuvuvukala nobuhlungu be-visceral njenge-endometriosis kanye ne-interstitial cystitis.
Ngingabelapha kanjani ubuhlungu bezinzwa ekhaya?
I-PEA iyimolekyuli enamafutha esiza ukusekela imithambo ye-myelin nerve sheaths yokusebenza okuhle kwezinzwa.
Ukushoda kwamavithamini eqenjini le-B akungabangeli izinzwa izinhlungu kuphela, kepha futhi kuyakhuphula.
Ezinye izimpawu ezingemnandi nazo zingavela, njengokuhamba okuxegayo, ukugedlezela nokuhlabana kwezandla nezinyawo, umuzwa wokuthi umuntu uhamba ngocingo oluhlabayo noma uboya bekotini noma ngisho nokuba ndikindiki kwe
Uvithamini B1 omncane kakhulu uholela ekuphazamisekeni kokusebenza kwezinzwa futhi ngenxa yalokho kube neuropathy nobuhlungu bezinzwa. Lapho ungeza i-vitamin B1, ubuhlungu buyancipha futhi ukusebenza kwemizwa kuyathuthuka. UVitamin B1 angathathwa kanye ne-PEA, lokhu kunikeza ukusekelwa okuhle ekusebenzeni kwezinzwa, kuvimbela ubuhlungu bezinzwa noma izinhlungu eziya ziba zimbi. Ucwaningo lwakamuva lukhombisile ukuthi abantu abaningi abanezinhlungu ezingapheli, abantu asebekhulile kanye nabanesifo sikashukela abanenani elanele lala mavithamini egazini labo. Lesi ngesinye sezizathu sokuthi laba bantu abangalashwa kuphela ngamaphilisi ezinhlungu; badinga
ngaphezu kwalokho. Amavithamini e-PEA kanye B asekela amasosha omzimba nawomzimba ezimweni zobuhlungu bezinzwa.
Ingabe uPalmitoylethanolamide uyi-cannabinoid?
I-CBD (Cannabidiol) iyikhompiyutha ekhishwe ku-hemp nensangu. Ngenkathi umzimba ukhiqiza ama-cannabinoids ngokwemvelo, i-CBD inezelwe ukufeza isidingo.
Ama-cannabinoids amakhemikhali asebenzayo angokwemvelo akhiqizwa emzimbeni anenkumbulo, izinhlungu, isifiso sokudla, nokunyakaza. Ososayensi bacabanga ukuthi ama-cannabinoids angaba usizo ekunciphiseni ukuvuvukala nokukhathazeka, acekele phansi amaseli omdlavuza, anikeze ukuphumula emisipha futhi andise iphango.
I-PEA iyi-fatty acid amide nayo ekhiqizwa emzimbeni futhi ingabizwa nge-cannabimimetic. Lokhu kusho ukuthi kulingisa imisebenzi ye-CBD emzimbeni wakho.
Kokubili i-CBD ne-PEA isebenza ngokungaqondile ngokuvimbela i-fatty acid amide hydrolase (FAAH), evamise ukuwohloka i-anandamide futhi iyenze buthaka. Lokhu kubangela amazinga aphezulu we-anandamide. Anandamide idlala indima enkulu esimweni sengqondo kanye nogqozi. Amazinga akhuphukile e-anandamide athonya kahle uhlelo lwe-endocannabinoid.
I-PEA ithole ukuthandwa futhi incintisana ne-CBD. I-PEA ithathwa njengeyona ndlela ephephile ye-CBD ngenxa yezinkinga ezingokomthetho ezibhekene nayo futhi neqiniso lokuthi iningi labantu alikwazi ukubekezelela amazinga aphezulu 'amatshe' eza ne-CBD.
Ngaphezu kwalokho, i-PEA ishibhile kakhulu kune-CBD. Kodwa-ke, i-PEA ingasetshenziswa ngaphezu kwe-CBD ukufeza imiphumela ye-synergetic.
Ingabe i-Pea i-endocannabinoid?
Cha, iPalmitoylethanolamide (PEA) iyi-endocannabinoid-like lipid mediator enezimpawu ze-analgesic kanye ne-anti-inflammatory. I-PEA isekela i-ECS ngokuguqula ukusayina kwe-endocannabinoid nangokuvula ngokungaqondile ama-receptors we-cannabinoid.
Uhlelo lwe-endocannabinoid (ECS) uhlelo olubalulekile lwezinto eziphilayo olulawula futhi lilinganise imisebenzi ehlukahlukene yomzimba emzimbeni. Ucwaningo lwe-ECS luholele ekuboneni ama-endocannabinoids hhayi kuphela njenge-anandamide (AEA) ne-2-arachidonoylglycerol (2-AG), kodwa futhi nabalamuli be-lipid-endocannabinoid-like lipitoylethanolamide (PEA). Lezi zinhlanganisela ezifana ne-endocannabinoid zivame ukuhlanganyela ezindleleni ezifanayo ze-endocannabinoids kepha zingabi nokuhlangana okubophayo kohlobo lwe-classical cannabinoid receptor 1 nohlobo 2 (CB1 kanye ne-CB2).
I-Palmitoylethanolamide (PEA) ne-Anandamide
I-Palmitoylethanolamide ne-anandamide zihlobene kakhulu njengoba zombili zingama-acid amide acid akhiqizwa emzimbeni.
I-PEA ne-anandamide kuthiwa banemiphumela yokusebenzisana ekwelapheni ubuhlungu futhi baphinde bathuthukise ababulali bezinhlungu abasetshenzisiwe.
Zibuye zidilizwe yi-fatty acid hydrolase enzyme emzimbeni, yingakho imiphumela etholakalayo lapho isetshenziswa ndawonye ingaphezu kwalapho isetshenziswa kokungezwani okumile.
I-Palmitoylethanolamide VS Phenylethylamine
I-Phenethylamine into yamakhemikhali ekhiqizwa umzimba ngokwemvelo. Kusetshenziselwa kabanzi ukuthuthukisa ukusebenza kwezemidlalo futhi kungasiza ukudambisa ukudana, usizo ekunciphiseni isisindo kanye nasekuthuthukiseni isimo somoya.
I-Palmitoylethanolamide ngakolunye uhlangothi iyi-amide acid amide eyaziwa kakhulu ngobuhlungu nokukhululeka kokuvuvukala.
Lezi zingxube ezimbili azihlobene. Ukuphela kwento ebaxhuma yikuthi bobabili bafushanisiwe njenge-PEA.
Ngisithatha kanjani isengezo sePalmitoylethanolamide (PEA)?
Ngenkathi sigcizelela inzuzo yokulwa nokuvuvukala ye-Palmitoylethanolamide phakathi kwezinye izinzuzo, kufanelekile ukuletha amanye amaqiniso akho nge-PEA. I-Pea yenzeka ezinhlayiyeni ezinkulu futhi ayinamanzi, lokhu kwenza i-Palmitoylethanolamide bioavailability kanye nokufakwa kwayo kungagcini.
Izindaba ezinhle, noma kunjalo, ukuthi abakhiqizi bagxila ekwakhiweni okuthuthukisa i-Palmitoylethanolamide bioavailability ukuze isetshenziswe kakhulu emzimbeni wakho. Kulawa, I-PEA powder ayatholakala ngefomu elijwayelekile le-powder nefomu le-micromized powder.
Ungathenga kuphi i-Palmitoylethanolamide (PEA) powder?
Sisesikhathini esithokozisayo lapho izitolo eziku-inthanethi seziyisitolo esisodwa sayo yonke into kubandakanya izimpahla zenqwaba ye-palmitoylethanolamide. Uma ucabanga ukuthatha i-PEA, cwaninga kabanzi ngabakhiqizi be-legit palmitoylethanolamide bulk supplement. Abasebenzisi abaningi be-palmitoylethanolamide bayithenga ezitolo eziku-inthanethi futhi kufanele bacabangele ukubuyekezwa kwabo nge-PEA powder emakethe.
I-CB1: Uhlobo lwe-Cannabinoid I-receptor
I-CB2: I-Cannabinoid type II receptor
CENTRAL: Irejista Ephakathi YeCochrane Yezilingo Ezilawulwayo
I-FAAH: I-fatty-acid amide hydrolase
I-NAAA: I-N-acylethanolamine hydrolyzing acid amidase
I-PPARα: I-Peroxisome proliferator-activated receptor alpha
I-PRISMA-P: Izinto zokubika ezincanyelwayo zezibuyekezo ezihlelekile kanye nama-Meta-Analysis Protocol
I-VAS Pain: Isikali se-Analog Scale Yobuhlungu
I-ECS: uhlelo lwe-endocannabinoid
 U-Artukoglu BB, uBeyer C, uZuloff-Shani A, et al. Ukusebenza kwe-palmitoylethanolamide yezinhlungu: ukuhlaziywa kwe-meta. Udokotela Wezinhlungu 2017; 20 (5): 353-362.
 USchifilliti C, uCucinotta L, uFedele V, et al. I-micitised palmitoylethanolamide inciphisa izimpawu zobuhlungu be-neuropathic ezigulini zesifo sikashukela. Ukuphathwa Kwezinhlungu 2014; 2014: 849623.
 UKeppel Hasselink JM, uHekker TA. Ukusetshenziswa kokwelapha kwe-palmitoylethanolamide ekwelapheni ubuhlungu be-neuropathic obuhambisana nezimo ezahlukahlukene zezifo: uchungechunge lwamacala. I-J Pain Res 2012; 5: 437-442.
 UKeppel Hasselink JM, uKopsky DJ. Indima ye-palmitoylethanolamide, i-autacoid, ekwelashweni okuyisibonakaliso kwezikhwama zemisipha: imibiko yamacala amathathu nokubuyekezwa kwezincwadi. I-J Clin Case Rep 2016; 6 (3).
 Costa B, Colombo A, Bettoni I, Bresciani E, Torsello A, Comelli F. I-endo native ligand palmitoylethanolamide iqeda ubuhlungu be-neuropathic nge-mast cell kanye ne-microglia modulation. I-21st Symposium Yonyaka Ye-International Cannabinoid Research Society. ISt. Charles, Il. I-Usa: iPheasant Run; 2011.
Ukubuka konke 1.Palmitoylethanolamide (PEA)
2.Yini iPalmitoylethanolamide (PEA)?
Izinzuzo ze-3.Palmitoylethanolamide - Iyini iPalmitoylethanolamide?
4. Ngubani okufanele athathe isengezo sePalmitoylethanolamide (PEA)?
5. Isebenza kanjani i-PEA ngobuhlungu?
6. Ngabe iPalmitoylethanolamide iyi-cannabinoid?
7.Kanjani ngithatha isengezo sePalmitoylethanolamide (PEA)?